Iindaba-Ingxoxo ngokuLibazisa ukuhanjiswa
Ixesha langoku lokuhanjiswa kwempahla liya kuba mva kancinane kunangaphambili. Ngoko ke zeziphi izizathu eziphambili zokulibaziseka ekuhanjisweni? Jonga le miba ilandelayo kuqala:
1, uMthintelo woMbane
Ekuphenduleni umgaqo-nkqubo "wolawulo olubini lokusetyenziswa kwamandla", umzi-mveliso uya kuthintela umbane kunye nemveliso. Ukunciphisa amandla kuya kukhokelela ekunciphiseni izinga lokusebenza, nto leyo ekhokelela ekunciphiseni umthamo wokuvelisa. Ukuba umthamo wemveliso uyasilela ukuhambisana nemfuno, kuya kubakho ukulibaziseka ekuhanjisweni.
2, Ukunqongophala kwezinto ezikrwada
Ngokomzekelo, i-aluminium, ngenxa yokunciphisa amandla okuvelisa i-aluminium ngenxa yokunciphisa amandla, umthamo wokuvelisa osetyenziselwa ukwenza iimveliso ze-aluminium ngokuqinisekileyo uya kuchaphazeleka, kwaye kuya kubakho imeko apho imfuno idlula ukubonelela. Ukunciphisa uluhlu lwempahla ekrwada kunye nokunciphisa umthamo wemveliso yeemveliso ezicutshungulwayo kuya kukhokelela ekwandisweni kwexesha lokuhanjiswa kwempahla.
3, Ukunqongophala kwe-IC
Okokuqala, bambalwa abavelisi abanokuvelisa ii-ICs ngobuninzi, nto leyo ephantse ibe yimonopoly.
Okwesibini, imathiriyeli ekrwada yemveliso ye-IC nayo inqabile, kwaye izixhobo kufuneka zisiwe.
Ekugqibeleni, ngenxa yemeko yesifo esibi kule minyaka mibini idlulileyo, kunye nokunyuka kombane, abasebenzi banexesha elincinci lokuqalisa umsebenzi kunye nokungonelanga kwabasebenzi, okubangela ukunqongophala kwee-ICs.
Ngenxa yeengxaki ezingentla apha, i-IC iyancipha, kwaye ukuveliswa kwezibane kufuneka kulinde ukufika kwe-IC, ngoko ke ixesha lokuhambisa libopheleleke ukuba libambezeleke.